KIOSK from Omyanmar
List of products by manufacturer KIOSK
Showing 25 - 48 of 160 items
ဘေးဆွဲတံခါး အ၀တ်အစားဗီရိုဖြစ်ပြီး၊ အတွင်း၌ အ၀တ်ချိတ်တန်း ၃ ခုနှင့် အကန့် ၅ ခုပါဝင်သည်။ Inside drawer with keylock ( optional for sale) ထို့ပြင်အတွင်း၌ သော့ခတ်နိုင်သည့်အံဆွဲတစ်ခုပါဝင်သည်။ (အပိုသီးသန့်ဝယ်ယူနိုင်သည်။) Size : W120*D56*H200 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၁၂၀၊ အနံ ၅၆၊ အမြင့် ၂၀၀ စင်တီမီတာ
BW-03 Brim sliding door wardrobe with3hanging rods and5compartments Inside drawer with keylock ( optional for sale: BWD-01) Size : W120*D56*H200 cm.
CARD CABINET-10 Drawers Recessed Handle
10 drawers card cabinet for A4, B4 sized paper with capsule handle. A4,B4 စာရွက်စာတမ်းများအပြင် ကဒ်များပါထည့်နိုင်သည့် ဆေးတောင့်သဏ္ဍာန်လက်ကိုင်နှင့် အံဆွဲ (၁၀)ခုပါသော အံဆွဲကြီး။
CARD CABINET-15 Drawers Recessed Handle
15 drawers card cabinet for A4, B4 sized paper with capsule handle. A4,B4 စာရွက်စာတမ်းများအပြင် ကဒ်များပါထည့်နိုင်သည့် ဆေးတောင့်သဏ္ဍာန်လက်ကိုင်ပါ အံဆွဲ (၁၅)ခုပါသော အံဆွဲကြီး။
Height open steel door corner cupboard with5adjustable shelves and graphic available. နံရံထောင့်များတွင်ထားသည့် စတီးဖွင့်တံခါး ဗီရိုမြင့်ဖြစ်ပြီး၊ အတွင်းတွင် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောစင် (၅)ခုပါဝင်သည်။
DESK 1 DRAWER
Single drawer desk အံဆွဲ (၁)ခုပါသောစားပွဲခုံ။ Size: W120*D60*H75 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၁၂၀၊ အနံ ၆၀၊ အမြင့် ၇၅ စင်တီမီတာ
DESK 120 CM WITH GLASS
Kurve – Desk with glass top 120 cm. Kurve – အပေါ်ပိုင်း မှန်အခင်းပါဝင်သော၊ အလျား-၁၂၀ စင်တီမီတာရှိသည့်စားပွဲခုံ။
DESK 150 CM WITH GLASS
Kurve – Desk with glass top 150 cm. Kurve – အပေါ်ပိုင်း မှန်အခင်းပါဝင်သော၊ အလျား-၁၅၀ စင်တီမီတာရှိသည့်စားပွဲခုံ။ Size: W150*D60*H75 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၁၅၀၊ အနံ ၆၀၊ အမြင့် ၇၅ စင်တီမီတာ
DOBBEL Kitchen Set
DOBBEL Kitchen Set #1 DOBBEL မီးဖိုခန်းပရိဘောဂအစုံလိုက်
Double pedestal – steel top with7drawers and keylock. ဗဟိုလုံခြုံရေးသော့စနစ်ပါဝင်သော အံဆွဲ (၇)ခုနှင့် ဘေးတိုင်ခုံနှစ်ခုပါရှိသည့် အပေါ်အခင်းပြားစတီးနှင့်စားပွဲခုံ။ Size: W150*D80*H75 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၁၅၀၊ အနံ ၈၀၊ အမြင့် ၇၅ စင်တီမီတာ
Double pedestal desk – steel top with7drawers and keylock. ဗဟိုလုံခြုံရေးသော့စနစ်ပါဝင်သော အံဆွဲ (၇)ခုနှင့် ဘေးတိုင်ခုံနှစ်ခုပါရှိသည့် အပေါ်အခင်းပြားစတီးနှင့်စားပွဲခုံ။ Size: W135*D60*H75 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၁၃၅၊ အနံ ၆၀၊ အမြင့် ၇၅ စင်တီမီတာ
Double pedestal desk – wood top with6drawers and keylock. ဗဟိုလုံခြုံရေးသော့စနစ်ပါဝင်သော အံဆွဲ (၆)ခုနှင့် ဘေးတိုင်ခုံနှစ်ခုပါရှိသည့် အပေါ်အခင်းပြားသစ်သားနှင့်စားပွဲခုံ။ Size: W150*D80*H75 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၁၅၀၊ အနံ ၈၀၊ အမြင့် ၇၅ စင်တီမီတာ
Double pedestal desk- steel top with central lockable6side drawers and 1 center drawer. ဗဟိုလုံခြုံရေးသော့စနစ်ပါဝင်သော ဘေးအံဆွဲ (၆)ခုနှင့် အလယ်အံဆွဲ (၁)ခုပါဝင်ပြီး ဘေးတိုင်ခံနှစ်ခုပါရှိသည့် အပေါ်အခင်းပြားစတီးနှင့်စားပွဲခုံ။
DOUBLE-BOX GLASS DOOR
Double-box glass door with2adjustable shelves and keylock. အတွင်းအံနှစ်ထပ်ပါသောမှန်တံခါးနှင့်ဗီရိုငယ်ဖြစ်သည်။
Double-box steel door with2adjustable shelves and keylock. အတွင်းအံနှစ်ထပ်ပါသောစတီးတံခါးနှင့်ဗီရိုငယ်ဖြစ်သည်။ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော စင် (၂)စင်ပါဝင်ပြီး သော့ခတ်နိုင်သည်။ Size: W44*D40.7*H88 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၄၄၊ အနံ ၄၀.၇၊ အမြင့် ၈၈ စင်တီမီတာ
Double-box steel door with2adjustable shelves and keylock. ( Including graphic ) Double-box စတီးတံခါးနှင့် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောစင် (၂)စင်ပါရှိပြီး သော့ခတ်နိုင်သည်။
Duo shoe set : Duo Swing Shoe set (SW-103*2)...
Duo shoe set : Duo Swing Shoe set (SW-103*2) ဖိနပ်စင်အစုံလိုက် (SW-103*2) Overall Size: W120*D20*H116.8 cm. စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ – အလျား ၁၂၀၊ အနံ ၂၀၊ အမြင့် ၁၁၆.၈ စင်တီမီတာ Inculding SW-103 2pcs SW-103 (၂)လုံးပါဝင်သည်။
2 drawer filing cabinet with rubber leg. အံဆွဲ (၂)ခုပါဝင်သော ဖိုင်ထည့်ရန်ဗီရို။ ရာဘာခြေတပ်ဆင်ထားသည်။ Size: W100*D40.7*H74 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၁၀၀၊ အနံ ၄၀.၇၊ အမြင့် ၇၄ စင်တီမီတာ
FILING CABINET-2 Drawers
2 drawers filing cabinet with recessed handle. လက်ကိုင်အမြှပ်နှင့် အံဆွဲကြီး (၂)ခုပါသော ဖိုင်တွဲဗီရို။ Size: W46.4*D62*H72 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၄၆.၄၊ အနံ ၆၂၊ အမြင့် ၇၂ စင်တီမီတာ
FILING CABINET-3 Drawers
3 drawers filing cabinet with recessed handle. လက်ကိုင်အမြှပ်နှင့် အံဆွဲကြီး (၃)ခုပါသော ဖိုင်တွဲဗီရို။
FILING CABINET-4 Drawers
4 drawers filing cabinet with recessed handle. လက်ကိုင်အမြှပ်နှင့် အံဆွဲကြီး (၄)ခုပါသော ဖိုင်တွဲဗီရို။ Size: W46.4*D62*H132 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၄၆.၄၊ အနံ ၆၂၊ အမြင့် ၁၃၂ စင်တီမီတာ
BV-01: Folding Table BV-01: ခေါက်စားပွဲ Size: W90*D49*H122 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၉၀၊ အနံ ၄၉၊ အမြင့် ၁၂၂ စင်တီမီတာ Save space နေရာစားသက်သာသည် Including book storage on table စားပွဲတွင် စာအုပ်များသိမ်းထည့်ရန်အတွက် နေရာများပါဝင်သည်
10 drawers form cabinet for A4 or B4 sized paper with circle handle style. A4,B4 စာရွက်စာတမ်းများအပြင် ကဒ်များပါထည့်နိုင်သည့် စက်ဝိုင်းသဏ္ဍန်လက်ကိုင်ပါ အံဆွဲ (၁၀)ခုပါသော အံဆွဲကြီး။ Size: W38*D45.7*H94 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၃၈၊ အနံ ၄၅.၇၊ အမြင့် ၉၄ စင်တီမီတာ